भाइरसले बदलेको भाष्य – Nepal Press
२०७८ असोज ८ गते
फिल्म वर्ष समीक्षा-२०२०
भाइरसले बदलेको भाष्य
२०७७ पुष ११ गते ९:११
१) कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २ खर्ब क्षति । १६ लाखले गुमाए रोजगारी । थपिए १२ लाख गरिब । वार्षिक ७५ करोड कारोबार गर्ने फिल्म हल नौ महिनादेखि ठप्प । २५ प्रतिशत फिल्मकर्मी पेशाबाट पलायन । ग्राफ उकालो लाग्न सक्छ । (योजना आयोगद्धारा गठित सरकारी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन २०७६/७७)
२)हलिउड स्टुडियो वार्नर ब्रोजद्धारा सन् २०२१ मा सबै १७ ठूला फिल्मलाई स्ट्रिमिङ गर्ने घोषणा । युनिभर्सल र डिज्नेद्धारा फिल्म पोस्टपोन्ड । फिल्म वितरणमा ‘हाइव्रिड’ वितरण प्रणालीको सुरुआत । एउटा ‘अभूतपूर्व फड्को’ । (एपी –एसोसिएटेड प्रेस)
३)चीनका कूल १२ हजार फिल्म हलमध्ये ५ हजार सँधैका लागि बन्द । चिनियाँ फिल्मले वर्ष २०२० मा ३० बिलियन युयानको क्षति व्योहोर्नुपर्ने । रिलिज पेन्डिङ भएका फिल्मबाट बलिउडको १.२ बिलियन डलर जोखिममा । खुलेका कतिपय हलहरु दर्शक अभावमा बन्द हुँदै (बीबीसी वर्ल्ड)
धन्यवाद ‘कोभिड–१९’ महामारीलाई जसले विश्व फिल्मकै पटकथा पुनर्लेखन गरिदियो ! त्यो ‘प्यान्डेमिक’ जसले बक्सअफिस शुन्यमा झरेको मात्र छैन, विश्व फिल्मको ‘न्यारेटिभ’मा अभूतपूर्व बदलावको श्रीगणेश भयो । पुँजीवादले सिर्जना गरेको मनोरञ्जनको ‘इको–सिस्टम’ टाइटानिक जहाजजस्तै डुब्न थालेको छ । हुनसक्छ यही कारण ‘प्यान्डेमिक’लाई अक्सफोर्ड डिस्नेरीले गत साता ‘वर्ष शब्द २०२०’ घोषणा गरिदियो ।
संसारले बाँचिरहेको समय एउटै छ अहिले । ५५ वर्षको नेपाली फिल्म, सय वर्षको बलिउड र १ सय १५ वर्षे हलिउडले एउटै पीडा बाँचिरहेका छन् । नेपाल र बलिउड पहिलोपटक संकटको सामना गर्दैछन् । हलिउड दोस्रोपटक महामारी झेल्दैछ । पहिले स्पेनिस फ्लु र अहिले कोभिड–१९ । सन् १९१८, अक्टोबर १० मा न्यूयोर्क टाइम्सको हेडलाइन थियो –‘इन्फ्लुएन्जा समाप्ती नभएसम्म नयाँ फिल्म रिलिज हुनेछैन ।’ ठ्याक्कै, सयवर्षपछि दुरुस्तै हेडलाइन राख्दा फरक पर्दैन । निष्कर्ष के हो भने : भाइरसले विश्व फिल्मकै आत्मा र आवरणको मूल्यमा परिवर्तन ल्याइदियो ।
वर्ष २०२१ लाई लिएर नेपाली फिल्म वृत्तमा तीनखाले अवधारणा चर्चामा छन् । पहिलो –अबको फिल्म परम्परागत लयमा फर्किनेछ । दोस्रो –फिल्म यसअघि नै संकटमा थियो र भाइरसले धक्का मात्र दिएको हो । तेस्रो : फिल्मको पारिस्थितिकिय प्रणाली (इको–सिस्टम) पुरै बदलिनेछ । यी तीन प्रक्षेपणमध्ये बलियो मत चाहिँ दोस्रोलाई मान्न सकिन्छ । किनभने, महामारीले घरेलु फिल्मको अर्थ–राजनीतिक ल्यान्डस्केपमा उथलपुथल ल्याएको छैन । न त प्याराडाइम सिफ्ट हुनेछ न त परम्पराको निरन्तरता । किनभने नेपाली फिल्मको उत्पादन र वितरण प्रणाली वर्णशंकर हो ।
भाइरस संकटको गणित :
बन्दाबन्दी (२०७६ चैत ११)पछि चलचित्र विकास बोर्डले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार १२ हजारले फिल्म क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । दुईसय ५ पर्दा थिए र हलका कर्मचारी संख्या ३ हजार ७५ करिब थियो । निर्माता संघका अनुसार साढे २ लाख रोजिरोटीका लागि फिल्म क्षेत्रमै आश्रित थिए । क्यूएफएक्सका २७ पर्दामा मात्र कर्मचारी संख्या पाँचसय बढी थियो । चलचित्र प्राविधिक संघ (नेफ्टा)का अनुसार ३ हजार पाँचसय प्राविधिकको जीवन यही क्षेत्रबाट गुजारा भइरहेको थियो । यीमध्ये २० प्रतिशत प्राविधिक सँधैका लागि पेशाबाट पलायन भैसके । एउटा प्राविधिक उत्पादन गर्न पाँचवर्ष लाग्छ । पलायन हुनेको आँकडा बढ्नेक्रममा छ ।
लकडाउनअघि आठ फिल्म छायांकनमा थिए । २१ फिल्म रिलिजलाई रेडी । चार करोड लगानी फसाएर बसिरहेको ‘प्रेमगीत ३’ जस्ता ठूला फिल्मको हैरानीको कथा कोभिडको कहरभन्दा तीतो छ ।
निर्माण–प्रदर्शन–वितरणको चक्र खलबलिँदा नेपाली फिल्म तीनवर्ष पछाडि धकेलिएको छ । दैनिक करोड घाटा खाइरहेको स्थिती छ अहिले । सर्वाधिक दबाब चाहिँ प्रदर्शन प्रणालीमाथि छ । झन्डै ९ अर्ब बराबरको बैकिङ ऋण र चर्को ब्याज यतिबेला प्रदर्शकको टाउकोमाथि छ । एकल पर्दाको अग्रणी गोपिकृष्ण हललाई महिनामा घटीमा ३५ लाख रुपैयाँ घाटा हुन्छ । हलका ७० कर्मचारीलाई मात्र मासिक १५ लाख खर्च हुन्छ । यो सिद्धान्तअनुसार अबको २/३ वर्ष नाफा हुँदैन ।
भाइरोलोजीले मात्र यो नाफा–घाटालाई परिभाषित गर्नेछैन बरु, सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक–राजनीतिक–मनोवैज्ञानिक श्रृंखलाभित्र नेपाली फिल्मको निकट अतित लुकेको छ ।
एउटा फिल्मले दिने अस्थायी रोजगारी कति होला ? प्रि–प्रोडक्सन चरणमा २०, छायांकनमा ५०, पोस्ट–प्रोडक्सनमा २०, रिलिज पूर्वसन्ध्यामा २०, वितरणमा आठ र अन्य काममा १५ जना । चार फिल्म बनेन भनेपनि एकवर्षमा कम्तीमा सयजना प्रत्यक्ष बेरोजगार हुन्छन् । यो त भयो एउटा फिल्मले दिने प्रत्यक्ष रोजगारी । अनौपचारिक रोजगारी त कति गुम्छ– गुम्छ । नेफ्टाका अनुसार गतवर्ष सामान्य अवस्थामै पनि २० प्रतिशत प्राविधिकले काम गुमाएका थिए । यी नीर्जिव अंकका पछाडि लुकेका सजिव मान्छेको व्यथाको श्रृंखला पीडादायी छ ।
भारतीय अखबार हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार लकडाउनको ६ महिनासम्म बलिउडले १३ सय करोड भारु गुमायो । हलिउड–रिपोर्टर म्यागजिनका अनुसार अमेरिकी फिल्म उद्योगले सोही अवधिसम्म ५ विलियन अमेरिकी डलर क्षति व्योह¥यो । हलिउडमा १४ हजार प्राविधिकले रोजगारी गुमाए । वार्नर ब्रोज स्टुडियोको कदम किनपनि तथ्यसंगत लाग्छ भने, राष्ट्रपतिय चुनावपछि राजनीतिक रुपमा विभाजित अमेरिकामा भाइरसको संक्रमण बढेको बढ्यै छ र त्यसलाई निमिट्यान्न पार्न अझै वर्ष लाग्छ सक्छ ।
यी त भए भाइरस र लकडाउनको तत्कालिन असर र प्रभावको गणितिय लेखाजोखा । हामी यहाँ वैश्विक महामारीको चरित्र र पटाक्षेपको चर्चा पनि सँगै गर्नु जरुरी छ जसले नेपाली फिल्मको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । के कोभिडको कालो बादलमा चाँदीको घेरा खोज्न सकिएला ? पक्कै पनि हाम्रा लागि बिलियन डलरको प्रश्न हो यो । भाइरसको खेला कहिले सकिन्छ भन्नेबारेमा भयंकर अनिश्चितता छ । ‘एन्ड–गेम’ के हो ? विश्वसनिय उपचार विधि (खोप)नआइ पुरानै अवस्थामा फर्कन सकिन्न । हुनसक्छ यही कारण फेसबुक र गुगलले सन् २०२२ सम्मका सबै ठूला कार्यक्रम रद्द गरिदिए । यसको अर्थ –वर्ष २०२१ पनि चिकित्सा र आर्थिक दुबै दृष्टिले कोभिडबारे अन्यौलग्रस्त हुनेछ ।
निर्देशक स्पाइक लीले कोरोनालाई ‘बोक्सी’ भन्दै खोप नबनेसम्म फिल्म हलसम्म नजाने घोषणा गरिदिए । उनको यो भनाइमा आममान्छेको मुड लुकेको छ । अभिनेता राजेश हमाल पनि तत्काल फिल्म हल खोल्न नहुने पक्षमा छन् । संक्रमणको स्थिती हेरेर मात्र हल खोल्नुपर्ने तर्कसँग हमाल र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतम सहमत छन् । योजना आयोगको उपरोक्त तथ्यांक केलाउँदा पनि गरिबीको रेखामुनी धकेलिएको १५ लाख जनसंख्याको प्राथमिकता फिल्म नहुनसक्छ ।
बादलमा चाँदीको घेरा :
ठूला संकटले ठूलै अवसर लिएर आउँछन् जस्तो कोभिड–१९ महामारी । बन्दाबन्दीमा नेपाली दर्शकले इन्टरनेटबाटै संसारका धेरै थरी फिल्म अवलोकन गर्ने अवसर पाए । कहिल्यै फिल्म नहेर्ने दर्शकले समेत टाइमलाइनमा फिल्म थ्योरीलाई परिभाषित गरे । लकडाउनले मनोरञ्जनको माग बढायो र औचित्य पुष्टि गरिदियो । हलमा फ्लप फिल्म, इन्टरनेटमा सुपरहिट भए । कोभिडले भुइँमान्छेमा सिनेम्याटिक लिट्रेसी र आलोचनात्मक चेतना विकास गरिदियो ।
हामीले देख्यौं : लकडाउनमा हल बन्द हुँदा कसरी अमेजन प्राइम, डिज्ने प्लस, एप्पल, हुलु र नेटफ्ल्क्सिजस्ता स्ट्रिमिङ साइटमार्फत दर्शकले फिल्म हेरेर मजा लिए । नेपालमै डिस होम, आइफिल्क्स, नेपफिल्क्स र युटयुवमार्फत नयाँ–नयाँ फिल्म चले । बक्सअफिस शुन्यमा झर्दा कसरी स्ट्रिमिङ र एप्स सेवा मौलाए भन्ने प्रत्यक्ष प्रमाण लकडाउनको कालखण्ड हो । यी आयामको सीधा अर्थ हुन्छ : स्ट्रिमिङ सेवाले फिल्म हेर्ने आनीबानी बदल्दैछन् र डिजिटल प्रभुत्व स्थापित हुने क्रममा छ । कोरोना भाइरस पछाडि हलसम्म दर्शकीय उपस्थितीमा हुने प्रभाव विश्व फिल्मकै लागि एउटा महत्वपूर्ण केस स्टडी बन्न सक्छ ।
बन्दाबन्दीमा फिल्मकर्मी घरभित्रै थुनिए । उनीहरुको दिनचर्या घरभित्रै बित्यो । संकटमा परिवारको मूल्य उनीहरुले महसुस गरे । कतिले खाना पकाउन सिके । कतिले योग साधना सिके । कतिले बगैंचा गोडमेल गरे । कतिले पत्नी र केटाकेटीसँग भावना साटे । एउटा मान्छेभित्र आएको नीजि परिवर्तन हो यो । यी भोगाइ कथावाचन, पटकथा लेखन, चरित्र चित्रण, द्धन्द्ध स्थापना र मुड विकासमा काम लाग्नेछन् । भन्नुको अर्थ, अब नेपाली फिल्ममा जनराको विकास राम्रैसँग हुनेवाला छ ।
महामारीपछि सामाजिक विश्रृंखलता सिर्जना हुनसक्छ । किन्से इन्स्टिच्युटको शोध भन्छ : रिलेसनसिपमा नभएकाहरुले आफूलाई ‘लोनली’ महसुस गरिरहेका छन् यस समय । जसले गर्दा रिलेसनसिप क्राइसिस पैदा हुनेछ । डिभोर्स र नयाँ सम्बन्धको ग्राफ बढ्नेछ । यो अध्ययनको प्रभाव फिल्मको चरित्र चित्रणमा प्रष्ट देखिनेछ । जसरी दोस्रो विश्वयुद्धको त्रासदीपछि अमेरिकीलाई भुलाउन हलिउडले ‘इस्केप्टिक’ (पलायनवादी) फिल्मको सहारा लिनुपरेको थियो । लगत्तै, इटाली र फ्रान्समा ‘न्यू वेभ’ सिर्जना भएको थियो ।
लयमा फर्कन चुनौति :
भाइरसको कहर नभएको भए निर्देशक एवं चिकित्सा मानवशाष्त्री डा. सचिन घिमिरे आफ्ना दुई फिल्ममा व्यस्त हुन्थे । रिलिजको तयारीमा रहेको उनी लिखित फिल्म ‘नीरफूल’ लकडाउन घोषणासँगै अनिश्चित बन्यो । फिल्म र भाइरसको चरित्रलाई नजिकबाट नियालिरहेका उनी कोभिड–१९ अगाडिकै अवस्थामा नेपाली फिल्म फर्कन चुनौति रहेको बताउँछन् । ‘कोभिड अगाडि नै फिल्ममा निकै बेथिती थियो । त्यही अवस्थामा पुग्न पनि कठिन छ’ उनको मूल्यांकन छ, ‘वर्ष २०२० ले हामीलाई निरुत्साहित गरेको छ । लगानी रोकिएको छ तर, चलचित्र विकास बोर्डले अघि बढाएका नीतिगत सुधारले आशा पलाएको छ ।’
बोर्डले यतिबेला राम्रा कथामा सरकारले लगानी गर्ने र विदेशमा आयोजना हुने फेस्टिभलमा फिल्म लैजान पैसा दिने तयारी गरेको छ । घिमिरेलाई लाग्छ, संसारको राजनीतिक अर्थशाष्त्रमा व्यापक परिवर्तन नहुने भएकाले फिल्ममा पनि ठूलै बदलाव आउँदैन । ‘जनरामा परिवर्तन आउँदैन । प्रि–प्रोडक्सन पनि तत्काल सुरु हुँदैन । मान्छेहरु लगानी गर्न डराएका छन्’ घिमिरे भन्छन्, ‘प्रभावकारी भ्याक्सिन नआएसम्म अवस्थालाई नर्मल हुने मान्न सकिँदैन ।’
स्टारडमको पुर्नव्याख्या :
‘सेलेव्रिटी कल्चर इज बर्निङ’ अर्थात सेलेव्रिटी संस्कृतिमा आइरहेको ह्रास शीर्षकको अमान्डा हेस लिखित आलेख अहिले चर्चामा छ । न्यूयोर्क टाइम्समा प्रकाशित आलेखमा उनले मार्भलका सुपरहिरो भान्सामा पसेर पाककलाको ज्ञान बाँड्दै गर्दा कसरी चिकित्सक र नर्सले फ्रन्टलाइनमा उभिएर संसारको रक्षा गर्दैछन् भन्ने चर्चा गरेकी छन् । उनी लेख्छिन् : सुपरहिरो, सेलेव्रिटी र आममान्छेको ग्याप मेटियो । भन्नुको अर्थ, के अब गोपिकृष्ण हलको बाल्कोनीबाट अनमोल केसीलाई काँधमा बोकेर खिचिएका तस्विर देख्न पाइएला ?
बरु टीकटक एपले धेरै किशोर–किशोरीलाई सेलिव्रेटीको रुपमा वर्गोत्थान गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तन्नेरी पुस्ताको लोकप्रिय प्लेटफर्ममा डेब्यु गरेका छन् । लाग्छ, कोभिड संकटपछि स्टारडमलाई व्याख्या गर्ने सोचमा परिवर्तन आउन सक्छ । जस्तै, कोभिड–१९ ले मार्भल सुपरहिरो र थानोसजस्ता सुपरभिलेनको उपस्थितीमै प्रश्नचिन्ह लगाइदिएको पक्का हो ।
कोभिड संकटकै बीच भारतमा बम्बैया फिल्ममाथि वंशवाद र ड्रग्समाथि विमर्श चल्यो । सुशान्तसिंह राजपुतको मृत्युमा कसरी बलिउड डाइनेस्टी जिम्मेवार छ र कसरी मुम्बइले युवा सपनाको हत्या गर्दैछ भन्ने डिस्कोर्स चल्यो । उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले त बलिउडलाई आफ्नो राज्यमा सार्ने अभियान चलाएका छन् फिल्म सिटी निर्माणमार्फत । यसको बाछिटा नेपालमा ‘महानायक’ इस्युमा प्रष्ट देखियो ।
फिल्म(हरु) हेर्नेछैनन्, फिल्म हेर्नेछन् :
औषतमा एउटा मान्छेले एक वर्षमा हलमा पुगेर चार फिल्म हेर्छ । कोभिड संकट सुरु भएपछि उत्पन्न आर्थिक मन्दीको प्रभाव उसको क्रयशक्तिमा परेको छ । जसले दर्शकलाई रिलिज फिल्ममध्ये केही मात्र हेर्नको लागि विकल्प उपलब्ध हुनेछ । यसो हुनु भनेको सीमित र बिग बजेटका फिल्म मात्र दर्शकको प्राथमिकतामा पर्नु हो । आम्दानीमा कमी आउनु हो । निर्माणमा उछाल लगानी गर्ने स्थिती पनि छैन । लाखौं पारिश्रमिक लिने ‘स्टार’को रेट न्यून विन्दुमा खुम्चनसक्छ । डिजिटल प्लेटफर्मको रुपमा रहेका डीस होम, केबल टिभि र युट्युव च्यानल निर्मातालाई संकटको साथी बन्नसक्छन् ।
क्षतिको आयतनका हिसाबले मेनस्ट्रिममा भन्दा स्वतन्त्र र कम बजेटका इन्डाइ–फिल्मलाई कोभिड असर कम परेको छ । सनडान्स, कान्स, टोरन्टो, भेनिस, ट्राइबेका, मुम्बइ, बुसान, बर्लिन लगायत विश्वका ठूला फिल्म फेस्टिभल भर्चुअल बनिसके । नेपालमा समेत किम्फ फेस्टिभलले भर्चुअल्ली फिल्म देखाउँदैछ । अस्करले कोभिडकै कारण अप्रिल २०२१ लाई नयाँ तिथि तय गरिसक्यो । अब हलमा मात्र हैन, फिल्मजन्य भीडभाड प्रेसमिट, अवार्ड र फेस्टिभल पनि डिजिटलमा नगै सुखै छैन ।
वेभ सिरिज, स्ट्रिमिङ र इन्डिपेन्डेन्ट फिल्मको लहर आउनेछ र यसले हलमा फिल्म हेर्ने परम्परागत तौरतरिकालाई थ्रेट पैदा गर्न सक्छ । आमसंचार विज्ञ म्याक लुहानले भनेजस्तो ‘माध्यम नै सन्देश हो’ भन्ने टाइपले मात्र पनि नहोला । कन्टेन्ट प्रमुख हुनेछन् अब । कोभिड युगपछि सिनेम्याटोग्राफरले चुम्बन, बेडसिन, डेटिङ र दुईसय जनाको कोरस जत्थाको डान्स कोरियोग्राफीमा कटौती गर्न सक्छन् । नयाँ कोणमा दृश्य कम्पोज हुनेछन्, भीएफएक्स र ग्राफिक्सजस्ता प्रविधि प्रयोगमा वृद्धि हुनेछ ।
स्पर्श भएर हुने र सामाजिक दूरी बनाउनुपर्ने दृश्यका डिजाइन नेपाली फिल्मको एलिमेन्ट बन्नेछन् । पुतलीसडक र बागबजारका भित्तामा हैन, सामाजिक संजालका भित्तामा पोस्टर र मार्केटिङका टुल्ज पोतिनेछन् । प्रविधिले फिल्म निर्माणमा प्रभुत्व जमाउँदा परम्परागत शैलीमा पोख्त प्राविधिक र जनशक्तिको बहिर्गमन हुनसक्छ ।
यसमा अर्को अवधारणा पनि छ : लकडाउनले गर्दा हलको कोक–पपकर्न र माहौल मिस गर्ने जमात पनि होलान् । हल खुल्ने वित्तिकै फस्ट–डे फस्ट–सो फिल्म हेर्ने मुड बनाएका पनि होलान् । अँध्यारो हलमा अपरिचितसँग कुममा कुम ठोक्दै फिल्म हेर्ने इच्छा भएका पनि होलान् । तर, स्थितीलाई कोभिडले ब्र्रेक गरिदिएको चाहिँ अवश्य हो । मनोरञ्जक हुनु भनेको सामाजिक हुनु हो । मनोरञ्जन गर्ने थलोमै सामाजिक दूरी पालना गर्दाको नयाँपन अझै धेरै वर्षसम्म कायमै रहने देखिन्छ ।
२०२१ का चुनौति :
कोभिडले ल्याएको क्षतिको म्याग्निच्युड केही वर्षसम्म पक्का रहनेछ जबसम्म खोप बन्दैन । जीवनलाई लय र दर्शकलाई हलमा फर्काउनुपर्ने चुनौति छ । यसका लागि राम्रा फिल्म बनाएर दर्शकलाई कमब्याक तुल्याउन सक्नुपर्छ । दिग्दार भएको दर्शकीय मुडलाई ठीक पार्ने थेरापीको भूमिका फिल्मले खेल्न सक्नुपर्छ । राजनीतिमा एउटा भनाइ छ : होप इज नट अ स्ट्राटेजी । फगत आशा मात्र राख्ने कुरा सुविचारित रणनीति हुनसक्दैन । यसका लागि या त भ्याक्सिन तयार हुनैपर्छ या त भाइरससँगै जीवन जिउने अनुशासन हामीमा विकास हुनुपर्छ ।
भारतीय लेखिका अरुन्धती रोयले लेखेजस्तै अहिलेको समय नयाँ विश्व भर्सेस पुरानो विश्व हो । इतिहासमा महाव्याधिहरुले आफ्नो विगतलाई भत्काएर नयाँ भविष्यको कल्पना गर्न बाध्य तुल्याएका छन् । यो संकट पनि तिनीहरुभन्दा पृथक छैन । अब फिक्सन सुपरहिरो हैन, सेतो एप्रोन पहिरिएका डाक्टर र नर्स सुपरहिरो नेपाली फिल्ममा चित्रण हुनेछन् । व्याख्या बदलिनेछन् र फिल्मले अझै मानवीय सेवा गर्नेछन् ।
स्टानफर्ड विश्वविद्यालयमा गतमहिना आयोजित एउटा भर्चुअल छलफल सत्रको निष्कर्ष थियो जुन नेपालको लागि सान्दर्भिक छ । नेपाली समाज र फिल्मका लागि त झनै सान्दर्भिक । पहिलो : भविष्यको अन्यौल सबैतिर छ । दोस्रो : केही वर्ष यस्तै रहनसक्छ र तेस्रो : आउने साल होइन, ५/१० वर्ष पछाडिलाई सोच्न थालिहाले हुन्छ ।
#फिल्म वर्ष समिक्षा २०२०
प्रकाशित: २०७७ पुष ११ गते ९:११
मिस नेपाल नम्रताले शुभारम्भ गरिन् यामहा एक्सचेन्ज मेला (तस्बिरहरु)
मिस युनिभर्स नेपालको आवेदन खुला, कात्तिक १३ गते ग्रान्ड फिनाली हुने
जेम्स बन्ड हिरो डेनियल क्रेग मानार्थ बेलायती सेनाको अफिसरमा नियुक्त
नेपाल युरोपेली फिल्म फेस्टिभल अन्तर्गत शुक्रबार ग्रीन फिल्म मेकिङबारे मास्टरक्लास हुँदै
मिडियाबाट पन्छिन खोज्दै गायिका समीक्षा, पलसँगको गसिप छल्न प्रेसमिट बङ्क !
दीपक-दीपा नयाँ फिल्म ‘कालो कोट’ बनाउँदै, सौगात मल्ल भिलेनको भूमिकामा देखिने
सचिन तेन्दुलकरकी छोरी सारा बलिउड डेब्युको पर्खाइमा
सगरमाथा बेसक्याम्‍पमा आज फेसन सो : इटाली र डच राजकुमारीसहित संसारका १४ सुपरमोडल सहभागी
सूचना नदिएपछि सबैला नगरपालिकाको गेटमा पाँच दिनदेखि अनसन
४ सचिव र ९ सहसचिवले अवकाश पाउँदै, को-को छन् सचिवकाे प्रतिस्पर्धामा ?
कांग्रेस निर्वाचनको तालिका हेरफेर, दसैँअघि स्थानीय तहका अधिवेशनमात्र हुने
कमेडी च्याम्पियन भरतमणीलाई योगेशले दिए ९ लाख (भिडिओसहित)
योगेशले भरतमणीलाई ९ लाख दिँदा सँगै चेक समातेका विक्की र सन्तोष खाली हात ! (भिडिओसहित)